Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ee Ay Maanta Oo Arbaco Ah Qoreen Wargeysyada Yurub - Gool24.Net
July 31, 2019 Saed Balaleti
Maalin wanaagsan akhristayaasheena sharafta leh meel walba oo aad joogtaan, sida aan inooga barateen waxaan maanta oo Arbaco ah idiin soo gudbineynaa wararkii ugu danbeeyay ee ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta qaarada Yurub ee ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
FIIRO GAAR AH: Wararka Suuqa kala iibsiga waxaa xaqiiqonimadooda iska leh hadba wargayska ku hor qoran ee xogta suuqa helay, sidaa daraadeed, shabakada Gool24 kama masuul aha xaqiiqinimada warararka suuqa kala iibsiga maadaama oo aanu soo turjunay oo kaliya.
Ceyrsashada Manchester United ee daafaca dhexe ee Ingariiska Harry Maguire ayaa gaari doonta ilaa iyo sacaada ugu danbeysa suuqa kala iibsiga Ingariiska ka dib markii ay Leiceser City diiday inay ka soo dabacdo 90ka milyan ginni ee ay duldhigtay xiddigaan. (Daily Telegraph)
Kooxaha Juventus iyo Manchester United ayaa heshiis afgarasho ah ka gaaray inay isku bedeshaan Paulo Dybala iyo Romelu Lukaku laakiin waxaa heshiiska ka harsan in Man United ay heshiis shaqsi ah la gaarto xiddiga Argentina ee Dybala. (Sky Italia)
Madaxda kooxaha Arsenal iyo Rennes ayaa wadahadalo ku yeeshay magaalada London oo ku saabsan saxiixa kabtanka kooxda Gunners Laurent Koscielny kaasoo gadood ku jira. (Daily Star)
Kooxda heysata horyaalka Faransiiska Paris Saint-Germain ayaa diidmada qayaxan saartay in 27 jirkeeda weerarka ka ciyaara Neymar uu u wareego kooxda Barcelona. (Marca)
War ka duwan kaas, madax ka tirsan kooxda Paris Saint-Germain ayaa la kulmi doona dhigooda Barcelona si ay uga wada hadlaan inay heshiis ka gaaraan saxiixa xiddiga reer Brazil Neymaru.(Mundo Deportivo)
Manchester United ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca dhexe ee Faransiiska iyo Barcelona 25 jirka Samuel Umtiti ka dib markii lagu qaaliyeeyay daafaca dhexe ee Ingariiska Harry Maguire. (Le10Sport)
Arsenal ayaa ku dhow inay dhameystirtay heshiiska 22 jirka daafaca bidix ee Celtic iyo Scotland Kieran Tierney. (Daily Mail)
Weeraryahanka Inter Milan iyo xulka Argentina Mauro Icardi oo 26 sanno jir ah ayaa laga yaabaa inuu 80 milyan euro ugu wareego kooxda Napoli. (Corriere dello Sport)
Weeraryahanka Juventus Moise Kean oo 19 sanno jir ah ayaa iska diiday inuu ku biiro Arsenal isagoo doortayEveron sababtoo ah kooxda Gunners uma balanqaadi karto weeraryahanka Talyaaniga boos joogta ah. (Daily Mail)
Madaxa guud ee Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa sheegay inuusan fahamsaneyn sababta uu tababare Niko Kovac uu u sheegay inuu kalsooni ku qabo saxiixa 23 jirka Jarmalka ee Manchester City Leroy Sane. (Bild)
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa sheegay inuusan ogeyn haddii 28 jirka reer Colombia James Rodriguez uu ku sii negaan doono Madrid xilli ciyaareedka soo socda. (Marca)
Daafaca dhexe ee Arsenal Shkodran Mustafi aabihiis ahna wakiilkiisa ayaa beeniyay in 27 jirkaan uu ku biiro koox Taltaani ah. (Romanews)
Tababarihii hore ee Chelsea iyo Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay inuu ku soo laaban doono shaqada tababare marka ay fursad soo baxdo. (Sky Sports)
Everton ayaa dooneysa inay afar xididg kale keento garoonka Goodison Park ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga iyagoo ku dhow saxiixa Moise Kean. (Daily Mail)
Everton ayaa sidoo kale 40 milyan ginni ku dalbaneysa xiddiga Barcelona Malcom oo ay doonayaan inay saxiixiisa daqiiqada ugu danbeysa ka afduubtaan kooxda reer Russia ee Zenit. (Daily Mail)
Kooxda Bournemouth ayaa isku diyaarineysa inay dalab 25 milyan ginni ah ka gudbiso xiddiga garabka ka ciyaara ee Liverpool iyo xulka Wales Harry Wilson. (The Sun)
Arsenal ayaa isku diyaarineysa inay dalab u hesho daafaca dhexe ee Jarmalka Skhodran Mustafi iyadoo kooxda Faransiiska ee Monaco ay ka mid tahay kooxaha xiiseynaya. (Daily Mirror)
Kooxda Talyaaniga ee Roma ayaa weli dooneysa daafaca dhexe ee Tottenham Toby Alderweireld waxaana ay diyaar u yihiin inay u soo bandhigaan qandaraas uu sannadkii ku qaadanayo 3.2 milyan ginni. (Daily Mirror)